23 Qof Oo Ku Dhintay Duqeyn Ka Dhacday Duleedka Magaalada Dimishiq.
Monday November 27, 2017 - 19:13:45 in Wararka by Super Admin
Tobanaan ruux oo Muslimiin ah ayaa lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka Al-Asad ay ka geysteen deegaano dhaca duleedka magaalada Dimishiq ee caasimada Syria.
Diyaarado dagaal oo la rumeysan yahay in ay yihiin kuwa Ruushka iyo Nidaamka Al-Asad ayaa duqeymo arxan daro ah oo ka dhan ah dadka rayadka ka geystay deegaano ka tirsan Guudhada bari ee duleedka magaalda Dimishiq sida ay sheegayaan kooxaha firfircoon ee soo tabiya kacdoonka dalka Suuriya.
Dadka deegaanka iyo taagerayaasha mucaaradka ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 23 ruux la dilay duqeymo xoogan oo ka dhacay degmada Guudha ka dib markii diyaaradaha cadowga ay si wuxuushnimo ah u garaaceen deegaanka.
Warbaahinada Maxaliga ah ayaa sheegaya in duqeymaha ugu daran ay ka dhaceen magaalooyinka Dooma, Misraba, Ceyn Tarma, Medeira, iyo Harasta, Iyagoo intaas ku daray in ay suuragal tahay in qasaaruhu uu intaas ka badan karo.
Duqeyntan ayaa qeyb ka ah weeraro xagga cirka ah oo maalmahan lagu hayey deegaanada Guudhada bari, waxaana la sheegay in duqeymo xiriir ah oo socday labadii todobaad ee ugu dambeeyey lagu dilay ugu yaraan 100 ruux oo shacab ah, laguna dhaawacay tiro kale.
Guudhada oo todobaadyadan la kulantay duqeymihii ugu xooganaa ayaa ka mid ahayd deegaano afar ah oo looga dhawaaqay xabadjoojin intii lagu gudajiray shirkii Astana ee loo qabtay mucaaradka iyo dowlada Asad ee ay dhexdhexaadka ka ahaayeen dowladaha Iran, Turkiga iyo Ruushka.
Guudhada bari waxay hooy u tahay in ka badan 300,000 oo ruux oo Muslimiin ah, Waxaana sababo ku aadan in ay u dhowdahay magaalada Dimishiq ay ka dhigtay meel marwalba bartilmaameed u ah weerarada xagga cirka ee Nidaamka iyo kuwa dowlada Ruushka.